Macluumaad Weyn ayaa Suuqgeyn ku riixaya Waqti-Saxan | Martech Zone
Xogta Weyn waxay ku riixaysaa Suuqgeynta Waqti-Waqti
Khamiis, Maarso 3, 2016 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Chris Hoyt
Suuqyayaashu had iyo jeer waxay raadinayeen inay la xiriiraan macaamiishooda isla waqtiga saxda ah - iyo inay sidaas sameeyaan kahor tartamayaashooda. Iyadoo la soo saaray internetka iyo waqtiga dhabta ah Analytics, Waqtiga loogu talagalay la macaamilka macaamiishaadu wuu sii yaraanayaa. Xogta Weyn ayaa hadda sameeynaysa suuq-geyn xitaa ka dhakhso badan, ka jawaab celin badan, iyo shaqsi ahaanba sidii hore. Xaddiga badan ee macluumaadka iyo awoodda xisaabinta ee daruuraha, taas oo sii kordheysa la heli karo oo la awoodi karo, waxay ka dhigan tahay in xitaa ganacsiyada yaryar ay ka jawaabi karaan suuqyada waqtiga dhabta ah, ogaadaan rabitaankooda iyo baahidooda (laga yaabee intaanay samayn), oo saadaalin iyo filayaan isbedelada.
Waa maxay Suuqgeynta waqtiga-dhabta ah?
Suuqgeynta waqtiga-dhabta ah waxaa loola jeedaa inay awood u leedahay inay la xiriirto macaamiisha isla xilligan ay u baahan yihiin ama ay ka jawaabi doonaan farriintaada. Waxay sidoo kale ka dhigan tahay inaad kula hadli karto macaamiishaada duruufaha xilligan jira. Suuqgeynta dhaqameed waa mid horay loo sii qorsheeyay iyadoo ku saleysan hab-dhaqanka ugu wanaagsan, xilliyeed ama jadwalka astaanta. Suuqgeynta waqtiga-dhabta ah ayaa si macquul ah loo qorsheeyay iyada oo ku saleysan dabeecadda, shaqsiyadda iyo goobta qofka qaataha bartilmaameedka ah. Had iyo jeer waa shakhsi sidoo kale.
Intii lagu guda jiray 2013 Super Bowl, markii korontada tagtay, Oreo waxay riixday xayeysiin daqiiqado gudahood ah oo leh "Weli waad mugdi kartaa mugdiga."
Taasi waa hal tusaale oo xiiso leh. Awood badan, Target wuxuu adeegsan karaa caadooyinka wax iibsashada si loo ogaado isbedelada nolosha iyo in qiimo dhimis wax soo saar ah loogu sameeyo macaamiisha, xitaa heer laga cabsado (eeg maqaalka Targetka oo ogaanaya goorta macaamiishu uur leeyihiin). Sidoo kale, tafaariiqleyda internetka, sida Amazon, waxay barteen inay saadaaliyaan marka laga yaabo inaad hoos u dhacdo alaabooyinka la isticmaali karo ee kiciya xusuusinta.
Shahaado yar, shirkadaha kuleylinta iyo qaboojinta ee isticmaali kara taariikhdii hore iyo xogta cimilada si loo saadaaliyo dalabka ayaa la tacaali kara mug aad u badan marka loo eego shirkadaha kaliya ee sugaya inta taleefanadu dhacayaan, maxaa yeelay waxay diyaarsadaan ilaha waqtiga ka hor. Makhaayadaha waxay adeegsan karaan qaabab wax iibsasho si ay u saadaaliyaan nooca cuntada ay macaamiisha doorbidaan xilliyada kala duwan ee sanadka. Runtii ma jiraan wax ganacsi ah oo aan ka faa'iideysan karin adeegsiga xogta si ay u saadaaliyaan, u saadaaliyaan, ugana suuq geeyaan macaamiishooda waqtiga dhabta ah.
Suuqgeyntu dhaqan ahaan waxay ku saabsaneyd tirada guud iyo fikradaha la iska aaminsan yahay. Waxaa jira dad aad u tiro badan oo adduunka ah, shirkadaha ma dareemayaan inay waligood dadka ku gaarsiin karaan heer shaqsiyeed. Intooda badan, dadku way fahmeen oo ay u dulqaateen maskaxdan "suuq weyn". Si kastaba ha noqotee, maadaama Xogta Weyn ay sii kordheyso, dadku waxay bilaabaan inay filayaan in loola dhaqmo shaqsi ahaan.
Waxay u muuqan kartaa mid caqli-gal ah, "Sidee xog dheeri ah uga dhigi kartaa shaqsiyaadka inay istaagaan?" Xaqiiqdii, taasi waa waxa ka dhigaya Xogta Weyn mid aad u xoog badan. Isbeddellada, caadooyinka, dookha, iyo dabeecadaha shaqsiyeed ayaa si fudud loo aqoonsan karaa loona fahmi karaa marka aad hayso xog badan oo aad ka soo qaadan karto. Xog yar, dhammaanteen waxaan la degaynaa celcelis ahaan. Macluumaad dheeri ah, waxaan ku bilaabi karnaa ku-habboonaanta waxyaabaha gaarka u ah macaamiishayada shaqsiyadeed.
Suuqyada tartanka, ganacsiyada la macaamilka macaamiisha si heer sare ah oo hal-hal-hal ah loogu talagalay ayaa ka guuleysan doonta kuwa aan arki karin wixii ka baxsan “macaamiisha celceliska ah” Waxaan ku jirnaa tartan mid.
EBook bilaash ah "Suuqgeynta xawaaraha ganacsiga"
Si aad wax dheeraad ah uga ogaato sida Xogta Weyn ay u beddeleyso suuqgeynta, una aragto daraasado kiis oo ku saabsan sida tafaariiqleyda, soo saarayaasha, iyo shirkadaha daryeelka caafimaad ay u adeegsanayaan xogtaas si ay ugu xoojiyaan suuqgeynta waqtiga dhabta ah, madax ka noqo Faaruuq oo soo dejiso waraaqdeena cad ee bilaashka ah.
Suuq Ku Degso Xawaaraha Ganacsi
Tags: xog weynsuuqgeynta xogta weynwarqad cad oo bilaash ahsuuqgeynta xawaaraha ganacsigaOreofooshawaqtiga dhabta ahwaqtiga dhabta ah xogta weynsuuq-geynta waqtiga-dhabta ahTwitterWarqad cad
Chris waa Agaasimaha Suuqgeynta Faaruuq, Lamaane ganacsi ayaa diirada saarey abuurista fursado Xogta Weyn ee macaamiishooda, halkaas oo uu ku soo saaray calaamadeynta iyo farriimaha laga soo bilaabo dhulka, laga bilaabo astaanta illaa meesha iibku ka baxayo.
Adeegsiga WordTracker si aad u dhisto Su'aashaada iyo Jawaabaha nuxurka